TRF telefishanka - The Reward Foundation - Jacayl, Galmo & Internetka
Bogga ugu weyn TRF on Television
Tan iyo bartamihii-2016 agaasimaha guud ee The Reward Foundation, Mary Sharpe, ayaa ka soo muuqanayay telefishanka. Waa kuwan qaar ka mid ah.
Abaalmarinta Abaal-marinta waxay ku faraxsaneyd fursadda lagu falanqeynayo shaqadeeda markii Mary Sharpe lagu casuumay barnaamijka The Nine ee BBC Scotland TV. Shayga Khamiista 5th Diseembar 2019 waxay ku saabsanayd kor u kaca ku yimid xanaaqa galmoodka iyo xiriirkiisa ku saleysan sinada. Arinta ku saabsan sharciga xaqiijinta da'da ayaa sidoo kale la soo qaaday iyaduna Maryan way awoodday in ay saxdo akhbaarta qaldan ee ka soo baxda BBC iyo warbaahinta guud ahaanba. Hirgelinta sharciga xaqiijinta da'da ee kujira Qeybta 3 ee Sharciga Dhaqaalaha Dijital ah ee 2017 ayaa lagu waday inuu dhaco sannadkan, laakiin dib ayaa loo dhigay, lamana dayrin. Xaqiiqdii, Wasiirka Xukuumadda Boqortooyada Midowday ee ku lug leh wuxuu xaqiijiyey qoraal ahaan inuu ku dari doono Sharciga Waxyeellada ee 'Online Harms Bill', sidaa darteed marin u helista sawirrada qaawan ee loo adeegsado websaydhyada ganacsiga iyo aaladaha warbaahinta bulshada ayaa ku koobnaan doona dadka ka weyn 18.
Qeybtu waxay ku bilaabatay weriyaha Sagaalka ah ee Fiona Stalker oo weydiineysa su'aasha Rabshad aan loo baahnayn inta lagu jiro galmada waa “caadi”? Waxay ku soo beegmaysaa iyadoo ay soo socdaan tiro ka mid ah kiisas ciqaabeed heer sare ah oo maqlay dhageysiga 'galmada qallafsan ee qalad gashay'. Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa sidoo kale muujisay tirada sii kordheysa ee haweenka da'da yar ee la kulma falalka rabshadaha aan loo baahnayn. Miyuu fudud yahay in lagu eedeeyo sawir-gacmeedka?
Martida Studio Rebecca Curran iyo Martin Geissler ka dib wareysi la yeeshay Mary Sharpe, oo ah Guddoomiyaha The Reward Foundation iyo wariye Jenny Constable, si ay u sahamiyaan arrintan murugsan. Fiidiyowgu wuxuu ku yaal laba qaybood.
Beesha Scott Gaelic waxay aragtay barnaamijkeedii ugu horreeyay ee u heellan saameynta qaawan ee qaawan oo ay ka mid tahay taxanaha An Sgrudaire (Baaraha) oo lagu muujiyey 21 March 2019.
Ruairidh Alastair ayaa ku soo laabtay su'aalo dheeraad ah oo ku saabsan arrimaha saameeya nolosha dhalinyarada, waxana uu raadinayaa jawaabo isagoo la hadlaya khabiiro, dhagaysiga shaqaalaheena iyo baaritaanka isaga oo adeegsanaya telefoonkiisa gacanta iyo murugadiisa.
Qeybtaan wuxuu baarayaa balwadda qaawan iyo dhibaatada ay u geysan karto, da'da markii marin u helidda galmada aysan waligeed ka sahlaneyn isku xirnaanta internetka xawaaraha sare leh iyo taleefannada gacanta. Soosaarka la muujiyey waa wada hadalka Ruairidh ee Mary Sharpe oo ka socda Hay'adda The Reward Foundation.
Mary Sharpe ayaa ku soo laabtay telefishanka Nolan Live at BBC Northern Ireland on 7th March 2018. Waxay ka doodey saameynta filimada qaawan ay ku leedahay caafimaadka maskaxda iyo jir ahaaneed ee caruurta iyadoo martida loo yahay Stephen Nolan oo u ololeeya arrimaha galmada iyo qof daroogo ka soo kabsanaya.
Mary Sharpe waxay ka soo muuqatay Nolan Live-ka BBC Northern Ireland 19kii Oktoobar 2016. Waxay ka doodeen waxa la barayo carruurta da'doodu tahay 10 jir martida loo yahay Stephen Nolan iyo qoraaga wargayska London Carol Malone. Fiidiyowgu wuxuu ka kooban yahay laba qaybood, midkiiba qiyaastii 6 daqiiqo 40 ilbidhiqsi.